ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ရဲ့ ကြက်သီးထဖွယ်သောင်းသောင်းဖြဖြ အိမ်ပြန်ခရီးပုံရိပ်များ | CeleTrend
ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ရဲ့ ကြက်သီးထဖွယ်သောင်းသောင်းဖြဖြ အိမ်ပြန်ခရီးပုံရိပ်များ
ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် ရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီး ပုံရိပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်….ဆရာမကြီးအတွက် ပြည်မြို့သူပြည်မြို့သားတွေက အမြဲ ဂုဏ်ယူ လေးစား နေမှာပါ။ ၂၇၊ ၅၊ ၂၀၂၀ ပြည်မြို့Case 30 ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် ပြည်မြို့က မေ့ဆေး ဆရာဝန်ကြီးဟာ Positive လူနာ တစ်ဦး ရဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ လူနာရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ventilator(လေဝင်ပေါက်) ကနေ tube (ပိုက်ရှည်) ထည့်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆိုတာ အနည်းဆုံး ဆရာဝန် သုံးဦးလောက် လိုအပ်ပါတယ်။အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ ဒီအခြေအနေမှာ ဒေါက်တာဟာ တစ်ခြား ဆရာ ဝန်တွေ ကူးစက်မှာ စိုးတဲ့ အတွက် သူတစ်ယောက်တည်းပဲ လုပ်ဖို့ ‌ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ventilator(လေဝင်ပေါက်) ကနေ tube (ပိုက်ရှည်) ထည့် ရာမှာ သုံးကြိမ်လောက်အထိ မအောင်မြင် ဒါကြောင့် ဒေါက်တာဟာ သူမရဲ့ အကာအကွယ်ဖြစ် တဲ့ Goggles(ရေ/လေကာ မျက်မှန်) ကိုချွတ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှ အောင်မြင်သွားပါတော့တယ်။
Goggles ကို ချွတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခံရမယ်ဆိုတာ ဒေါက်‌တာ ကောင်းကောင်း သိတယ်။အဲ့ဒီထက် ဒေါက်တာ ပိုသိနေတာက လူနာ အသက်ရှင်ဖို့တဲ့……..ဒေါက်တာဟာ positive လူနာ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ တော့ ……….သူမ ဟာ positive လူနာဖြစ်သွားတော့တယ်။သူ့အသက်ကို စွန့်ပြီး လူ‌နာအသက်ကို ရွေးသွားတယ်။ သူမ ဟာ အခန်းအပြင် ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့အနားကို ဘယ်ဆရာဝန်မှ မကပ်ခိုင်းတော့ပါဘူး တဲ့ဒေါက်တာ ရဲ့ အဖြေအတည်ပြုချက်မှာ ညက positive ထွက်လာတဲ့အချိန် ယူနီဖောင်းတွေ ချွတ် ပြီး ဒေါက်တာကို မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကို ခေါ်သွားကြဖို့ PPE ဝတ်စုံ ပြည့်သူတွေ ရောက်ရှိလာတော့တယ်။ငိုယိုနေကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကို ဒေါက်တာက မငိုဖို့အတွက် ခေါင်းခါပြတယ်။လူနာ‌ တွေ နဲ့ ထိတွေ့ကြတဲ့အခါ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ မှာတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါက်တာ ပြန်လာခဲ့မယ် တဲ့ …တစ်ချိန်လုံး ငြိမ်သတ်နေတဲ့ ပြည်မြို့ကြီးက ဒေါက်တာ ပြန်လာခဲ့မယ် လည်းဆိုရော ရှိုက်သံ ပါအောင် ငိုပါတော့တယ်။
ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်စိန် က ခပ်ပါးပါးပြုံးရင် လူနာတင်ယာဉ်ပေါ်ကို တက်သွားတော့တယ်။ ယာဉ်တန်းကြီးက ပြည်မြို့ကနေ ရန်ကုန် မြောက်ဥက္ကလာ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီး ကို ဦးတည် အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းနှင်ထွက်ခွာတော့တယ် ပြည်မြို့ကြီးက ရုတ်တရက် မျက်ရည်တွေ သုတ်ပြီး ယာဉ်တန်းနောက်ကို အပြေးအလွှား လိုက် ရင် လှမ်းအော်ပြောတယ် ဒေါက်တာ ကတိတည်ရမယ် နော် တဲ့…….(မေလ ၂၅ရက် )တော့ recover ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရပါပြီ။ဒီနေ့ မေလ ၂၇ မှာတော့ ကျန်းမာစွာနဲ့ ပြည်မြို့ကို ပြန်ပါတော့မယ်။ဪ ဒါနဲ့ ပြည်မြို့ကြီးရေဒေါက်တာ ကတိတည် တယ်နော်…ဆရာမကြီးအတွက် ပြည်မြို့သူပြည်မြို့သားတွေက အမြဲ ဂုဏ်ယူ လေးစား နေမှာပါ။၂၇၊ ၅၊ ၂၀၂၀ ပြည်မြို့
ဆရာမကွီးဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျ ရဲ့ အိမျပွနျခရီး ပုံရိပျတှေ ဖွဈပါတယျ….ဆရာမကွီးအတှကျ ပွညျမွို့သူပွညျမွို့သားတှကေ အမွဲ ဂုဏျယူ လေးစား နမှောပါ။ ၂၇၊ ၅၊ ၂၀၂၀ ပွညျမွို့Case 30 ဒေါကျတာ ဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျ ပွညျမွို့က မဆေ့ေး ဆရာဝနျကွီးဟာ Positive လူနာ တဈဦး ရဲ့ အရေးပျေါ အခွအေနမှော လူနာရဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးထဲကို ventilator(လဝေငျပေါကျ) ကနေ tube (ပိုကျရှညျ) ထညျ့ဖို့ လိုအပျလာပါတယျ။ဒီလိုလုပျဖို့ ဆိုတာ အနညျးဆုံး ဆရာဝနျ သုံးဦးလောကျ လိုအပျပါတယျ။အန်တရာယျမြားလှနျးတဲ့ ဒီအခွအေနမှော ဒေါကျတာဟာ တဈခွား ဆရာ ဝနျတှေ ကူးစကျမှာ စိုးတဲ့ အတှကျ သူတဈယောကျတညျးပဲ လုပျဖို့ ‌ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ventilator(လဝေငျပေါကျ) ကနေ tube (ပိုကျရှညျ) ထညျ့ ရာမှာ သုံးကွိမျလောကျအထိ မအောငျမွငျ ဒါကွောငျ့ ဒေါကျတာဟာ သူမရဲ့ အကာအကှယျဖွဈ တဲ့ Goggles(ရေ/လကော မကျြမှနျ) ကိုခြှတျပွီး လုပျဆောငျမှ အောငျမွငျသှားပါတော့တယျ။
Goggles ကို ခြှတျတဲ့ အခြိနျမှာ ဗိုငျးရပျဈပိုး ကူးခံရမယျဆိုတာ ဒေါကျ‌တာ ကောငျးကောငျး သိတယျ။အဲ့ဒီထကျ ဒေါကျတာ ပိုသိနတောက လူနာ အသကျရှငျဖို့တဲ့……..ဒေါကျတာဟာ positive လူနာ အခနျးထဲက ပွနျထှကျလာတဲ့ အခြိနျမှာ တော့ ……….သူမ ဟာ positive လူနာဖွဈသှားတော့တယျ။သူ့အသကျကို စှနျ့ပွီး လူ‌နာအသကျကို ရှေးသှားတယျ။ သူမ ဟာ အခနျးအပွငျ ရောကျတဲ့ အခြိနျမှာ သူ့အနားကို ဘယျဆရာဝနျမှ မကပျခိုငျးတော့ပါဘူး တဲ့ဒေါကျတာ ရဲ့ အဖွအေတညျပွုခကျြမှာ ညက positive ထှကျလာတဲ့အခြိနျ ယူနီဖောငျးတှေ ခြှတျ ပွီး ဒေါကျတာကို မွောကျဥက်ကလာ ဝဘောဂီ ဆေးရုံကို ချေါသှားကွဖို့ PPE ဝတျစုံ ပွညျ့သူတှေ ရောကျရှိလာတော့တယျ။ငိုယိုနကွေတဲ့ ဆရာဝနျတှေ ကို ဒေါကျတာက မငိုဖို့အတှကျ ခေါငျးခါပွတယျ။လူနာ‌ တှေ နဲ့ ထိတှကွေ့တဲ့အခါ အထူးဂရုစိုကျဖို့ မှာတယျ။ ပွီးတော့ ဒေါကျတာ ပွနျလာခဲ့မယျ တဲ့ …တဈခြိနျလုံး ငွိမျသတျနတေဲ့ ပွညျမွို့ကွီးက ဒေါကျတာ ပွနျလာခဲ့မယျ လညျးဆိုရော ရှိုကျသံ ပါအောငျ ငိုပါတော့တယျ။
ဒေါကျတာ မွငျ့မွငျ့စိနျ က ခပျပါးပါးပွုံးရငျ လူနာတငျယာဉျပျေါကို တကျသှားတော့တယျ။ ယာဉျတနျးကွီးက ပွညျမွို့ကနေ ရနျကုနျ မွောကျဥက်ကလာ ဝဘောဂီဆေးရုံကွီး ကို ဦးတညျ အရှိနျပွငျးပွငျး မောငျးနှငျထှကျခှာတော့တယျ ပွညျမွို့ကွီးက ရုတျတရကျ မကျြရညျတှေ သုတျပွီး ယာဉျတနျးနောကျကို အပွေးအလှား လိုကျ ရငျ လှမျးအျောပွောတယျ ဒေါကျတာ ကတိတညျရမယျ နျော တဲ့…….(မလေ ၂၅ရကျ )တော့ recover ဖွဈပွီး ဒေါကျတာ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရပါပွီ။ဒီနေ့ မလေ ၂၇ မှာတော့ ကနျြးမာစှာနဲ့ ပွညျမွို့ကို ပွနျပါတော့မယျ။ဪ ဒါနဲ့ ပွညျမွို့ကွီးရဒေေါကျတာ ကတိတညျ တယျနျော…ဆရာမကွီးအတှကျ ပွညျမွို့သူပွညျမွို့သားတှကေ အမွဲ ဂုဏျယူ လေးစား နမှောပါ။၂၇၊ ၅၊ ၂၀၂၀ ပွညျမွို့